Dubartiin Ulfaa ta’uu osoo hinbariin du’a mucaasheetiif himatamte bilisa baate – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Hagayya 14,2011 (FBC) –Shamarreen lammii El Saalvaador kan taate Eveliyaan Hernaandeez akka jetteetti, bara Faranjoota Ebla 6, 2016 osoo mana shee baadiyaa El Saalvaador jirtuu dhukkubbin garaa cimaan itti dhagahamuun dhiigni dhangala’e jette.
Guyyaa to’annoo jala itti olfamtee kaaftee, du’a mucaashee keessa harka akka hinqabne himaa turte.
Sababiin dhiyeessaa turtes,ulfa ta’ushee akka hinbeeknee fi wayita ciniinsuun qabu of wallaalu himaa turte.
Abbaan alangaa biyyattii garuu hidhaa waggaa 40 gaafate ture.
Biyyi El Saavaador addunyaa kanarraa biyyoota seera farra ulfa baasuu cimaa qaban keessaa tokkoodha.
Karaa kamiinu ulfa baasuun yakka yoo ta’u, kanneen yakka kana raawwatanis hidhaa waggaa afurii hanga 8 itti murtaa’a.
Haa ta’u malee, yeroo baayyee kan dubartii kanaa dabalatee, himannaan ulfa baasuun walqabatu gara yakka ajjeechaa cimaatti geedaramuun yoo xinnaate hidhaa waggaa 30 itti murteessutti geedarama.
Achinis mana fincaanii manaan alatti argamu deemuun achitti of walaalte. Isaan booda haatishe gara mana yaalaa geessan. Hospitaala geenyaan akka deesse turte ogeeyyiin fayyaa baran.
Isaan boodas erga reeffii mucaashee mana fincaanii argame kaafte hidhamte.
Hernaandeez, wayita sanatti waggaa 18 turte. Namoota gareen nama gudeedaniin kan gudeedamte ture ta’ushee fi ulfaa’u gonkumaa akka hinbeekne himte.
Sababii dhiiga darbee darbee argaa turteefu, akka laguutti yaaduun ulfaa fi ciniinnaa garaa ta’u adda baasuu akka hindandeenye dubbatti.
“Akkan ulfa ta’e osoon beeke ture, dahumsa gammachuufi bonaan eegadha ture,” jettee turte.
Jalqaba ulfa ofiirraa baasuun kan himatamte turte yoo ta;u, booda abbaa alangaatiin ulfa dhokfachuun tajaajila wallaansa dahumsa duraa osoo hinargatiin haftee jirti jechuun gara himannaa ajjeechaa cimaatti akka geedaramu taasifame.
Bara Faranjoota Hagayya 2017 keessa ammo, abbaan alangaa Hernández ulfa ta’ushee ni beekti jechuun yakkamtuudha jechuun murteesse. Achinsi hidhaa waggaa 30 kan itti murtaa’e yoo ta’u kana keessaa baatiiwwan 33 hidhamte jirti.
Bara Faranjoota Guraandhala 2019, Manni murtii Olaanaa biyyattii ragaa hinqabu jechuun abbaa alangaa haaraan irra deebiin akka ilaalamuuf murte baraFaranjoota 2019 darbe haqee.
Hernández hanga dhimmishee irra deebiin Hagayya keessa ilalamuu eegalutti wabiin mana hidhaatii baate.